Monday May 13, 2019 - 09:02:36 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Waxa aan doonayaa in aan talooyin wax-ku-ool ah siiyo madaxda Somaliland aniga oo aan xil iyo xoolo toona ka doonayn.
1. Xadhigga badan iska daaya: Madaxdeenu ma fahamsan tahay in ay jiraan dad jecel in la xidho si loo barto. Dadka noocaas ihi ma laha aqoon, garaad iyo tamar kale oo ay ku caan baxaan. Waxay adeegsadaan afxumo, been iyo dad iska horkeen si loo xidho kadibna berry magacooda baraha bulshada iyo TVyada looga sii daayo. Mar qudha ayuu qofkii saaqidka ahaa noqonayaa dulmane, halyay, xaq-u-dirir, dulmi-diid. Waxa habboon in aan loo jawaabin kaasoo kale laguna daayo in bulshadu xukunto. Qofka la xidhayaa waa in uu noqdaa qof ficil ahaan ugu kacay wax sharciga ka soo horjeeda. Weliba waa in loo diraa fariin uu isku soo dhiibo marka hore isagoo xor ah. Haddii u diido in uu u
hoggaan samo amarkaa, waxa uu lagu eedaynayaa danbi labaad oo ah diidmo.
2. Hubsiimo hal baa la siistaa: Waxa aan dugsigii hoose ku baratay laba murtiyood oo aan had iyo goor maskaxda ku hayo. Waxa ay yhiin "stop to think, iyo look before you leap”. Haddii aanad badbaadinayn naf ma hanti, maxaa diidya in aad sugto oo aad tallabda aad qaadayso u talo badsato si aad u qaaddo ta ugu habboon xaaladaa. Mar mar waxaaba dhici karta in qofku danbiyo kale sii dabaasho markaana aad hesho garawshiiyo.
3. Doorashada ha la qabto: Waxa jira kooxo badan oo aan doonayn in aany doorasho dhacdo waayo haddii ay dhacdo waxa waddanku yeelanaya gole degaan, ku barlamaan iyo madaxweyne kuligood ku jooga codka shacbiga. Kooxaha doorashada diidan waxa ka
mid ah xubnaha reer Somaliland ee Xamar fadhiya oo ku doodi kara in ay iyaga iyo xildhibaanada golayaasheenna imika fadhiyaa ay isku mid yihin waqitigan xaadirka kol haddii aanu midkoodna ku iman cod shacbi sidaa darteedna ay xaq u leeyihiin in ay ayagu u metalaan Somaliland wada hadallada Somalia. Xukuumadda maxaa kaga xumaanya hadii ay aqblaan waxa ay codsanyaan Xisbiga Waddani. Meesha madaxweyne
lama dooranayo? Dadka is sharaxyaa iyagaa ilaashanaya sanaaduuqa codadka xisbigay doonaan ka ku ordain e. Haddii 9 laga dhigo iyo haddii toddobal dhigo wax u dhexeeyaa ma jirto. Waxa muhiim ah in ay beeluhu isku dheeli tirman waayo loona badiyo beelo
dhexdhexaad u ah murashaxiinta.